Jackie Chan Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha Asia Jackie Chan Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Yedu Jackie Chan Biography inokuudza Chokwadi pamusoro peNyaya yehucheche Nyaya yake, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Mudzimai, Vana, Mararamiro, Mota, Net Kukosha uye Hupenyu hwePamoyo.
Muchidimbu, iyi Nhoroondo yeHupenyu yeHong Kong martial artist, mutambi, stuntman, mugadziri wefirimu, chiito choreographer, uye muimbi. Isu tinotanga kubva pamazuva ake ehudiki, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira.
Hongu, munhu wese anoziva nezve ake ekuremedza mabasa mumabhaisikopo anonamatwa nevateveri pasirese, asi vashoma vanoziva nezve rake biography uye vanorwira stardom izvo zvinonyanya kufadza. Iye zvino pasina imwezve nzira, ngatitangei.
Jackie Chan Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Upenyu Hwekutanga
Kune ekutanga maBiography, ane zita rekuti 'Pao-Pao'. Chan Kong-Sang akaberekwa 7 Kubvumbi 1954 muHong Kong inozivikanwa Victoria Peak. Akazvarwa kuna amai vake Lee-Lee Chan uyo aiva (muchengeti wemba) uye baba Charles Chan, a (kubika). Vabereki vake vaiva vapoteri vanobva kuChinese hondo yevagari vemo vakatamira kuHong Kong.
Little Chan akafananidzirwa pamusoro akapedza makore ake ekukura mune yekune dzimwe nyika mugari. Amai vake vakamutumidza zita rekuti “Pao-Pao ” nekuti aive nesimba pakuberekwa. Chan aive aine simba panyama semucheche. Jackie achiri mudiki, baba vake vaimumutsa mangwanani-ngwanani uye pamwe chete vaidzidzira kung fu, maekisesaizi.
Baba vake, Charles Chan vaitenda kuti kudzidza kung fu kwaizobatsira kuvaka hunhu hwaJackie, kumudzidzisa kushivirira, simba uye ushingi. Kubva pamaonero edzidzo, Chan akapinda Nah-Hwa Primary Chikoro pa Hong Kong Island, kwaakakundikana gore rake rekutanga. Izvi zvakaita kuti vabereki vake vamubvise pachikoro. Kuteverwa kwakatevera kwaive kwababa vake kuenda kuAustralia kunoshanda semubiki mukuru weamburenzi yeAustralia. Izvi zvakaitika mu1960 apo Chan mudiki aive 6 makore.
Asati aenda kuAustralia, Chares Chan akatumira mwanakomana wake muduku kuChina Drama Academy uko akatanga kudzidza martial arts, drama, acrobatics uye kuimba. Akagara ikoko kwemakore anotevera e10 akanga asingakanganwiki kuti ave pasi pekurangwa kwakasimba, kusanganisira chirango chemhosva zvakare nokuda kwekusaita zvakanaka. Akavandudza mushure mokukunda pfungwa dzevadzidzisi vake sezvaakaonekwa mune zviduku zviduku mumitambo yakasiyana-siyana yechikoro chake paakawana chivimbo chake zvakare.
VERENGA Jennie Kim Kukura Kwemwana Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Kare kumashure, mwana mumwe nomumwe akavaka basa mukuita akatsigamira kutevera tsoka ya Lee Jun-fan, anozivikanwa zvakanyanya saBruce Lee. Chan aiwanzoshanyira vabereki vake muAustralia kwaaizoita basa renguva yakazara. Akawana zita 'Jackie' paainge achishanda semuvaki muCanberra, kuAustralia.
Jackie Chan Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Kukurira Mukurumbira
Chan akatanga dhiyabhorosi basa rake somutongi muBruce Lee mafirimu, “Chibhakera Chehasha” uye “Pinda Dhiragoni”. Mushure mekufa kwaBruce Lee kwakashata, kusatarisirwa muna 1973, Chan akasarudzwa semunhu angangotora nzvimbo yejasi rake samambo weHong Kong cinema. Kusvika izvozvi, akaisa nyeredzi mune tambo yemafirimu ekung fu.
Chan anga afunga kuti arikuda kubuda muforoma yaLee uye nekudaro akagadzira mufananidzo wake uye ndokusanganisa hunyanzvi hwekarati nehunyanzvi hunoshamisa. Chan akasimbirira pakuita zvese zvake zvinyowani uye akawedzera pfungwa yeiyo screwball yemuviri mutambo kune kwake kuita. Chan zvechokwadi akawana yake fomula yegoridhe cinematic. Gore mushure mekuburitswa kwa “Nyoka Mumumvuri Wegondo ” mu1978, Chan akatora iyo Hong Kong firimu renyika nedutu neake ekutanga anonzi "kung fu comedy," izvozvi-zvekare Dhakwa Ishe. Kubva ipapo, akazove zita remhuri. Vamwe vese, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Jackie Chan Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Ukama Hupenyu
Muna 1982, Chan akaroora mutambi wechiTaiwanian Lin Feng-jiao, anozivikanwawo saJoan Lin. Vane mwanakomana mumwe, mutambi uye muimbi anonzi Jaycee Chan uyo akazvarwa mugore rimwe chete remuchato wavo.
Chan anonzi akazvara mwanasikana, Etta (akaberekwa musi wa XNUMt January 18) kuburikidza nesangano ne Elaine Ng Yi-Lei aimbove Miss Asia 1990. Kunyangwe Jakie Chan aisada kusiya mukadzi wake wekutanga saka akafunga kupa rubatsiro rwemwana (HK $ 350,000 / mwedzi) kuna Elaine naEtta achitangazve hupenyu hwake hwekuroora naLin Feng Jiao. Vazhinji vevateveri vake vakati HK $ 350,000 / mwedzi imari yekudyidzana yekudyara. Jackie Chan akazorega kupa rubatsiro. Nekudaro, Elaine akafunga kuti aizochengeta mwanasikana wake asina Chan.
VERENGA Jack Ma Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Jackie Chan Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Upenyu hweMhuri
BABA: Charles Chan, baba vaJackie Chan vakazvarwa mu1914 muAnhui, China seFong Dao-Long (kana Fong Dou-Loong). Baba vake, Fang Zhengwen (Mandarin Pinyin), vakamudzidzisa karati achiri mudiki kwazvo. Paaive nemakore gumi nematanhatu, Charles akadzidza Xiahong mutambo wetsiva kubva kuna Master Zhang mu Shanghai kupedzisa paakanga ari 19.
Nekuda kwekuve baba vaJackie Chan, Charles akaita muchidimbu mumamwe mafirimu eKhan akadai se Mapurisa Nhau 2. Haana kupedzisa zvikonzero zvepuraimari nekuti aive akanyanyisa kudzora mukirasi uye kuti aifanira kudzidza basa kuburikidza nekudzidzira basa. Kugara muAustralia kwemakore makumi mana, Charlie Chan akabva pamubiki mukuru kumuzinda weUS kuenda kune muridzi weresitorendi akabudirira, kunyangwe mazhinji emakore ake ekupedzisira akange apedzwa kuHong Kong nemutambi wake mwanakomana mushure mekufa kwemukadzi wake.
Baba vaChan Charlie vakafa muchipatara cheHong Kong munaFebruary 26, ane makore 93, mushure mekurwa nekenza yeprostate. Chan akaunza mutumbi wake kuCanberra, Australia kwaakavigwa padivi paLee Lee Chan, uyo akafa muna 2002.
"Izuva rakaoma. Ndaida baba vangu zvakanyanya nokuti akandiitira zvakawanda pandakanga ndichiri muduku. Takanga tine mhuri yakashata uye akabva kuHong Kong kuti azvitsigire. Akanga ari baba vakanyanya kwandiri, " chakashungurudza Chan akaudza vatori venhau.
AMAI: Lee-Lee Chan anonziwo Lily Chan ndiye amai vaJakie Chan. Akazvarwa munenge muna 1916. Vabereki vaLee-Lee vaive nechitoro uye murume wake wekutanga aishanda semugadziri weshangu, akazoshanda pachiteshi chechitima. Murume wake wekutanga akaurayiwa kubva kumabhomba kubva kuJapan airwisa muWuhan uye aine makore makumi maviri nemasere, iye akasara achirera ega-oga vanasikana vake vaviri, Yulan (aive nemakore gumi nemaviri pakafa baba vake) naGuilan (vana pa nguva).
Lee-Lee Chan akafira pa 28 February 2002, in Canberra, Australia ane makore angangoita makumi masere nemashanu uye akavigwa muGungahlin Cemetery.
VERENGA Khabib Nurmagomedov Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
BROTHERS: Jackie Chan ane hama mbiri dzinonzi; Fang Shide uye Fang Shisheng. Iye zvakare ane hanzvadzi mbiri dzinoti; Yulan Chan naGuilan Chan.
Jackie Chan Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: Movie Injury Facts
Jackie akambopedza mazuva maviri mushure mekurwa achiedza kusundidzira bhonzo rake kuti ridzokere muchibhakera asi akazoona kuti raive zino remumwe mukomana.
Akambosvetuka ndege uye akadzika pamusoro pebhokisi rinopisa nemhepo mukati mekukuvara mukati.
Anoramba achiedza kutora ruoko pazvikwata zvinokundikana uye njodzi kusvikira abudirira.
Munguva ye'Armor of God 'aive mutsaona uye ane plug yepurasitiki zvachose mu dehenya rake.
Akambovhuna gumi nemaviri mabheki nemaoko ake, asi achichengeta dhe raive rakabata zvakasimba. Akaramba achikuvadzwa zvishoma.
Akavhuna mhino dzake katatu, akakuvadza mabvi ake, akaparadzanisa mapepa ake ose, mapepa ake uye sternum uye akapwanya mahudyu ake pakati pemotokari mbiri.
Jackie Chan Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi: General Facts
Akakunda Guinness World rekodi ye "Zvizhinji zvinokanganisa neanorarama mutambi".
Chan haana kumbofarira Rush Hour akateedzana asi akazviita nekuti akabhadharwa mari isingadzivisike yemari. Jackie Chan Anobvuma Iye Haasi Mufeni we'Rush Hour 'Firimu.
Akatakura pfuti dzakawanda uye kunyangwe grenade kuti azvidzivirire nevamwe vake maartist kubva kuTriad muma80s nema90s. Utatu ndeimwe remapazi mazhinji eChina nyika dzakapatsanurwa dzakapara mhosva dziri muChina, Hong Kong, Macau neTaiwan uye munyika dzine vanhu vazhinji vekuChina.
Ane vane stunt fighters avo vanotaurirana pavanomurwisa nemanzwiro akajeka.
Anoda bhora uye anotsigira timu yebhokisi yeHong Kong National, England National football team neManchester City.
Zvinhu zviviri chete zvinotyisa iye zvingano uye kutaura pachena.
Mumwe musikana akazviuraya paakaziva kuti Jackie Chan akanga aroorwa.
Tinokutendai nekuverenga yedu Jackie Chan Yevacheche Nyaya uyezve untold biography chokwadi. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana kuti utibate!